musha » Forum
Mibvunzo nezve edu demos.
Bvunza mibvunzo yako pane edu Cloudways mademo.
10 mwedzi, 3 masvondo apfuura
Bvunza mibvunzo yako pane edu DreamHost mademo.
1 gore, 2 ago
Bvunza mibvunzo yako pane edu Flywheel mademo.
Bvunza mibvunzo yako pane yedu Kinsta mademo.
Bvunza mibvunzo yako pane yedu WooCart mademo.
Madhemoni kuWP Injini
Bvunza mibvunzo yako pane yedu WP Injini demos.
Kutenga-kutengesa, Rezinesi, Kubhadhara, Zvinyorwa
Rondedzero yezvese WPSOLR inoburitswa.
1 mwedzi, 1 vhiki kare
Unenge wagutsikana kuti unoda WPSOLR, asi kwete chaizvo .. Bata isu pano.
4 mazuva, 5 maawa apfuura
Zvepamutemo, mitemo nemirairo
Mitemo uye mamiriro, kubhadharisa, kurongeka, invoice, mitengo, discounts
2 makore, 9 mwedzi yakapfuura
Kuvhiya, deactivation, reactivation, zvigaro, kugadzirisa, kusimudzira, kurodha
1 zuva, 8 maawa apfuura
2 mwedzi, 3 masvondo apfuura
Hira mugadziri weWordPress iwe waunoda Iva nepfungwa yakajeka yezvaunoda kuti zviitwe? Tumira purojekiti yako mumaminitsi asingasviki mashanu uye nyanzvi dzedu dzichadzoka kwauri nekufungidzira. Uye mahara kutumira yako projekiti.
11 mwedzi, 3 masvondo apfuura
Unyanzvi uye kugadzirisa nyaya
Custom Work Zvikumbiro
Kutsvaga WPSOLR Mushandisi kugadzirisa yako webhusaiti. Ndokumbira utumire zvaunokumbira pano.
Mavhiki e2, mazuva 2 apfuura
Zvitsva zvine zvikumbiro
Bvunza kune zvitsva zvinhu pano: plugins nyowani uye misoro kubatanidzwa, kana kungoita zvinhu zvitsva.
Kugadziriswa mibvunzo, feedbacks, bugs.
Mibvunzo yehunyanzvi: mashandiro, hurongwa, kugadzirisa matambudziko, zviputi.
4 maawa, 42 maminitsi apfuura
Zviito uye mafirita
WPSOLR Maitiro uye mafirita ekugadzirisa Solr, Elasticsearch, uye Algolia yekurongedza nekutsvaga: zviitiko uye Mafirita (Hook)
Solr, Elasticsearch, Algolia, Weaviate - Vanopa Vanopa
Kugadzira masumbu, kugadzirisa chengetedzo, paSolr, Elasticsearch, Algolia, uye Weaviate IaaS, PaaS, kana SaaS vanopa.
Solr, Elasticsearch, Algolia, Weaviate - Chero chipi zvacho kunze kwekupa Vanopa
Kuisa, kana kugadzirisa Solr, Elasticsearch, Algolia uye Weaviate. Schema, analyzer, firita, munda, mhando yemunda, mitauro yakawanda, zvakafanana, chiratidzo, stopword, stem
5 mazuva, 7 maawa apfuura
Yepamberi scging nenguva kana kureba kuora
Ronga nemazuva, chinhambwe, mutengo asi chengetedza mhinduro dzakakodzera
2 makore, 8 mwedzi yakapfuura
Wedzera kuwedzera kukurumidza kwekutsvaga neAjax peji zorodza
Sarudza kuti ndedzipi minda inofanirwa kutsvaga. Vape uremu hwakakodzera (hunowedzera)
1 gore, 3 ago
Crontab API jenareta
Reindex iyo data mushure mekutakura kwakakura. Ronga indexing neiyo chaiyo linux cron tab kuburikidza neyedu JSON api
6 mwedzi, 3 masvondo apfuura
Tsanangura kutsvagisa kutsvaga masayiti akawanda, mukumisikidzwa kwemazhinji, kana kwete.
Nhengo pamwe nekwavo zvimiro
Hierarchy, Nhamba yehuremo, Zuva renji, Slider, Sarudza2, Ruvara rwekusarudza, Zuva Picker, Checkbox, Radiobox
Shandisa vashanyi geo -inogadzirisa kuti agadzirise zvekutsvagisa kure. Great chete, kana neLisifying theme.
Mibvunzo pamusoro pekugadzirisa kugadzirisa.
1 gore, 7 ago
Mazano chaiwo-nguva mubhokisi rekutsvaga. 2 modes: mazwi akakosha ("autocomplete"), kana zvawanikwa ("live search")
7 mwedzi, 1 vhiki kare
Widgets kudhonza & kudonhedza mune yako yekutsvaga peji padivi Maficha (kana "mafirita"), uye Ronga rondedzero.
1 gore, 5 ago
WordPress Dhatabhesi indexing
Shandurudza, uye kutumira Wordpress dhatabhesi kuSolr, Elasticsearch uye Algolia. 3 modes: chaiyo-nguva, yemanyore batch, kana chaiyo linux crontab masheji.
Kubatanidzwa neArtificial Intelligence APIs
WPSOLR yakabatana kune akati wandei Chakagadzirwa Intelligence APIs kutora, kunongedza uye kutsvaga kubva magwaro, OCR gwaros, mifananidzo, uye mavhidhiyo.
Mufananidzo uye OCR - Amazon Rekognition Artificial Intelligence API
WPSOLR yakabatana ne Amazon Rekognition Artificial Intelligence API yekubvisa, index, uye kutsvaga ruzivo kubva kumagwaro eOCR nemifananidzo.
7 mwedzi, 3 masvondo apfuura
Mufananidzo uye OCR - Google Vision Artificial Intelligence API
WPSOLR yakabatana ne Google Vision Artificial Intelligence API yekubvisa, index, uye kutsvaga ruzivo kubva kumagwaro eOCR nemifananidzo.
Natural mutauro - Amazon Inzwisisa Artificial Intelligence API
WPSOLR yakabatana ne Kunzwisisa kweAmazon Artificial Intelligence API yekubvisa, kunongedza, uye kutsvaga ruzivo kubva kumagwaro: zviitiko, mazita, vanozivikanwa, manzwiro, nzvimbo, mazuva, nhamba dzenhare, adresses nevamwe.
8 mwedzi, 1 vhiki kare
Natural mutauro - Aylien Chinyorwa Kuongorora Artificial Intelligence API
WPSOLR yakabatana ne Aylien Chinyorwa Kuongorora Artificial Intelligence API yekubvisa, kunongedza, uye kutsvaga ruzivo kubva kumagwaro: zviitiko, mazita, vanozivikanwa, manzwiro, nzvimbo, mazuva, nhamba dzenhare, adresses nevamwe.
Natural mutauro - Google Natural Mutauro Artificial Intelligence API
WPSOLR yakabatana ne Google Natural Mutauro Artificial Intelligence API yekubvisa, kunongedza, uye kutsvaga ruzivo kubva kumagwaro: zviitiko, mazita, vanozivikanwa, manzwiro, nzvimbo, mazuva, nhamba dzenhare, adresses nevamwe.
Natural mutauro - ZvinorevaCloud Chakagadzirwa neUngwaru API
WPSOLR yakabatana ne ChirevoCloud Artificial Intelligence API yekubvisa, kunongedza, uye kutsvaga ruzivo kubva kumagwaro: zviitiko, mazita, vanozivikanwa, manzwiro, nzvimbo, mazuva, nhamba dzenhare, adresses nevamwe.
Mutauro wechisikigo - Qwam Chinyorwa Kuongorora Chakavanzika Chekuita API
WPSOLR yakabatana ne Qwam Chinyorwa Ongorora Artificial Intelligence API yekubvisa, kunongedza, uye kutsvaga ruzivo kubva kumagwaro: zviitiko, mazita, vanozivikanwa, manzwiro, nzvimbo, mazuva, nhamba dzenhare, adresses nevamwe.
Tsvaga uye firita ne ACF minda: Yekutanga (zvinyorwa, mameseji, nhamba, password, url, email), Sarudzo (sarudza, bhokisi, redhiyo, yechokwadi / nhema), Zvemukati (wysiwyg, faira url, faira id, faira rakarongeka), Kamisheni (zvinodzokororwa, zvinoshanduka zvirimo, tabu, dombo)
6 mwedzi, 2 masvondo apfuura
Tsvaga mumisoro, mhinduro uye maforamu. Chengetedza bbPress theme yekutsvaga kutarisa uye kunzwa.
Shandisa buddyPress yekubatanidza kutsvaga chero chinhu. Kuuya manje
Tsvaga chero chinhu uye zvese zviri mune yakabatana saiti-yakafara kutsvaga. Kuuya manje
Tsvaga mumafaira anosanganiswa ne Embed Chero Gwaro
Tsvaga mumafaira akaiswa neGoogle Doc Embedder
Ratidza / uvanzi zvawanikwa zvichienderana nemapoka evashandisi
Kubhadharwa Nhengo dzePro
Tsvaga mumafaira akabatanidzwa nePD Embedder
Tsvaga mune yako akawanda-lingual zvemukati. Dudziro zvakare zvese zvinyorwa zvemapeji ekutsvaga, uye mafirita mafaera, ine Polylang tambo module
Ratidza / kuvanza zvawanikwa zvichienderana nehuwandu hwevashandisi / masimba
Index faira yemhando mitundu. Zvakare, chinja zvimisikidzwa nezvinyorwa nemaToolset munda zvinyorwa.
Kurumidza uye wedzera zvikamu kune Toolset Archive Views.
Mavhiki e3, mazuva 5 apfuura
Speedup WooCommerce shopu uye mapoka anotsvaga mune imwechete kodhi, ine simba mafirita (cheki bhokisi, radio, inotsvedza, mutengo renji). Chengetedza yako yepamberi-yekupedzisira theme maficha uye tarisa uye unzwe
2 mazuva, 1 awa kare
1 gore, 8 ago
Kurumidza WP Gridbuilder neElasticsearch, Solr, Algolia.
WPML Yakagadzirira. Tsvaga yako yakawanda-lingual zvemukati. Zvakare, shandura zvinyorwa zve peji rekutsvaga uye mafirita zvinyorwa neWPML tambo module
1 gore, 10 ago
1 mwedzi, 3 masvondo apfuura
4 mwedzi, 1 vhiki kare
Kubatanidzwa pamwe nemusoro
Speedup Directory + tsvaga mune imwechete kudzvanya, uchichengeta izvo zvinoita uye tarisa uye unzwe. Kurumidza kumhanyisa zvinhu kutsvagisa, chikamu chefaji, nzvimbo yemafirita, radius firita
Speedup Rondedzero rondedzero kutsvaga mune imwechete konzera, apo ichichengeta ayo maficha uye tarisa uye unzwe
Speedup MyListing tsvaga mune kamwe chete, uku uchichengeta maficha uye tarisa uye unzwe. Tsigira MyListing yakasarudzika mhando mhando uye yavo tsika minda. Geolocation uye Sefa nedaro zvinotsigirwa.
10 mwedzi, 1 vhiki kare
Inowanikwa neAlgolia uye WPSOLR
zvakapetwa zvigadzirwa zvinoratidza kumberi kwekupedzisira
Hauna kuwana maitiro ekumisa kutongwa kuvandudzwa
yekubatanidza nyaya - tsika minda, kumhanyisa, kudonhedza pasi runyorwa mhando nezvimwe
Bug: Hapana kunongedzera kunogoneka ne22.1, kunyangwe nekugadziriswa
WPengine staging domasi fomati haitenderi kutongwa
Elasticpress shingle TokenFilter kukanganisa
tsika inoshanda ne plugin + algolia
Chete "zvigadzirwa" zvemhando yeposvo zvakanyorwa mushure mekugadziriswa kusvika 22.1
mutauro wechihebheru usipo
html ma tag mune yekutsvaga mhinduro (algolia)
Rezinesi harishande pane nyowani yekuisa
Toolset Views Kutsvaga kusiri kushanda mushure mekubatanidzwa
yatadza kuenzanisa munda
Hapana zvigadzirwa zvinoratidzwa kune chigadzirwa tag tag
Kuenderana neApache SOLR 8.9.0
Indexing yekudzosa kukanganisa
Facet haina kugadzirisa mushanduro 22.1
WP Solr isiri kuremekedza Mafirita ekuona mafirita
Bug: Mheremhere Maka muFirita neAlgolia
Bug: Kudzvanya kumashure kubva kumafirita
chinja chena yekufukidza yemutakuri neanopenya chena gradient
Bug: kudzvanya kumberi pane pagination neAjax
Ndakatadza kugadzira firita yezvigadzirwa zviri kutengeswa neWPSOLR + WOOCOMMERCE
WPsolr kusangana inokundikana
Noindex / Kwete Tevera ese eWPSolr URL's
Bvumidza kuisa kunze kwechimwe chinhu chakakosha kubva kune taxonomy / hunhu / zvikamu mafirita
Tsvaga mhando sarudzo